Myanmar Idol ကို အပြစ်မြင်သူတွေ အကောင်းမြင်သူတွေ အတွက် Myanmar Idol Vote System ဆိုတာ ဒီလိုပါ..။ - APANNPYAY
Home / Myanmar Idol / ဗဟုသုတအစုံ / ပြည်တွင်းသတင်း / အဆိုတော်များ / Myanmar Idol ကို အပြစ်မြင်သူတွေ အကောင်းမြင်သူတွေ အတွက် Myanmar Idol Vote System ဆိုတာ ဒီလိုပါ..။
Myanmar Idol ကို အပြစ်မြင်သူတွေ အကောင်းမြင်သူတွေ အတွက် Myanmar Idol Vote System ဆိုတာ ဒီလိုပါ..။
Apann Pyay 10:49 AM Myanmar Idol , ဗဟုသုတအစုံ , ပြည်တွင်းသတင်း , အဆိုတော်များ Edit
Myanmar Idol Vote System ဆိုတာ ဒီလိုပါ..။
တစ်နိုင်ငံ လုံးက ပရိတ်သတ်တွေ ပါဝင်စေချင်လို့ vote
စနစ် နဲ့ လုပ်တဲ့ပွဲပါ အရေအတွက်မကန့်သန့်မရှိလုပ်ထားလို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့
အဆိုတော် နောက်တစ်ဆင့်တက်စေချင်ရင် Vote များများ ပေးကြပါလို့ ဒိုင်တွေကရော ကျော်ထက်အောင် ကရော အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေကြတာ ကြားမိ မြင်မိကြမှာပါ....... အခုက ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံး ဖြစ်တဲ့ သူကို ဆုပေးတဲ့ပွဲမို့ သူ့အဆို ပညာ ကို အဓိက ပြိုင်ကြတဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူး...... ဒါကို Myanmar Idol Season 1 ကြည့်ဖူးသူတိုင်း ဥာဏ်လေး နည်းနည်းရှိရင်တောင် သိကြမယ်ထင်ပါတယ်....... ဒါကိုမကျေနပ်ဘူး ဆိုရင် အစအတည်းက ဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်အမှတ်ပေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်သင့်ပါတယ်. ကြည့်သင့်ပါတယ်....အခုMyanmar Idol က ပရိတ်သတ်အဆုံးအဖြတ်ဆိုတော့ Winner ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်အတွက်ပရိတ်သတ် အခိုင်အမာ ရပြီးသားဆိုတော့နောက်ထပ် လျှောက်လှမ်းမဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းအတွက်အရမ်းအစဉ်ပြေပါတယ်..... အနုပညာရှင် အဆိုရှင်အသစ်တွေဆို သူတို့ကို ပရိတ်သတ်သိအောင် လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ အသိဆုံးပါ Myanmar Idol ဝင်ပြိုင်လိုက်တာနဲ့ ညီတို့ ညီမတို့ကို တို့ကို မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးက သိသွားခဲ့ပါပြီ ဒီအချက်နဲ့တင် ညီတွေ ညီမတွေ Myanmar Idol ကို ကျေးဇူးတင်သင့်နေပါပြီ အနုပညာလောကမှာ အရည်အချင်းနဲ့တက်လာတယ် ဆိုတာ ၁၀ ရောက်မှာ ၁ ရောက်လောက်သာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကျန်တဲ့ ၉ ဦးကတော့ သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ် ရေခံမြေခံကောင်းမှု Background ကောင်းမှုတွေ နောက်တခုက ကတော့
အနုပညာစမ်းထမှုပါ .... ပြောချင်တာက အနုပညာစမ်းထမှု ..... ကျန်တာတွေက လုပ်ယူ၍ ရနိုင်ပါတယ် ကြိုးစားမယ် အားလုံးကြိုးစားကြမယ်
နောက်ခံထောက်ပံ့မှု အားကောင်းမယ် ဒါလည်းလုပ်ယူလို့ရတယ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာစမ်းထမှုကတော့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်တာဆိုတော့ လုပ်ယူလို့မရနိုင်ပါဘူး ကျွန်တော့်ကို ကြိုက်ပါ ကျွန်မကို Vote ပါနော် လို့ လုပ်ယူ၍ မရနိုင်ပါဘူး .... အနုပညာအလုပ်ဟာ စမ်းထမှု အရမ်းလိုပါတယ် သူ့စမ်းထတဲ့အချိန်မှာ အချိန်ကိုက်လုပ်ယူရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေလို့ပါ.......
ဥပမာ မြောက်များစွာ ရှိပါတယ် .........
ပြေတီဦး အနုပညာလောကမှာ ၁၀ စုနစ် တခု လုပ်ရှားရုံးကန်ကြိုးစားလာတာ အရံအဆင့်မှာတင် ရပ်တန့်နေတယ် ဒါပေမယ့် သူ့ စိမ်းထတဲ့အချိန်မှာတော့ အကယ်ဒမီတွေ နှစ်စဉ်ရလို့ မနာလိုသူတွေပေါခဲ့တယ်
(ဒွေး သေမှ မင်းသားဖြစ်တာပါ ဘာညာပေါ့ ) အဲ့ဒါ မနာလိုသူတွေ ပြောစကားပါ သူကတော့ ဒါတွေပြောနေလည်း သူ့အောင်မြင်မှုနဲ့သူ ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး........
စမ်း နဲ့ လုပ်ရတဲ့ အနုပညာ အလုပ်မှာ သူလေးက ကြိုးစားပါတယ် ဘာလို့ မရတာလဲ ဘာလို့ထွတ်ရတာလဲ
သူကတော့မကောင်းဘဲနဲ့ ဘာလို့ အဆင့်တွေတက်နေတာလဲ လို့ပြောနေကြမှာလဲ........
ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ အစီအစဉ်က ဘာ System နဲ့ ဆုံးဖြတ် တဲ့ အစီအစဉ် ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
ဒေါသ တွေ ဖြစ်မနေကြပါနဲ့တော့.....
စိတ်သောကတွေ ဖြစ်မနေကြပါနဲ့ .......
နိုင်ငံကြီးသား ပီသ ကြပါ တို့ ကောင်းတဲ့သူကို Vote ပေးကြပါ ဆိုပြီး ပြောနေတာဟာ Vote System ရဲ့
ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိနားမလည် လို့သာ ပြောနေကြတဲ့စကားပါ ......
ကိုယ် က ဒီ မင်းသားကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်အဖေ အမေ ကို ဒီမင်းသားကြိုက်ရမယ် ဆိုရင်မရသလိုပေါ့.....
ကိုယ့် အမြင် သူ့ အမြင် ကိုယ့်အကြိုက် သူ့ကြိုက်နဲ့ Vote
ပေးကြတာမို့ အချင်းချင်း ဒေါသတွေ မာနတွေ မထားကြပဲ ကိုယ်အားပေးတဲ့ အဆိုတော် နောက်တစ်ဆင့်တက်စေဖို့ Vote များများ ပေးကြပါစို့
ဒါကတော့ MPT Idol ပါ ခင်ဗျာ ......
အဲလေမှားလို့ Myanmar Idol ပါ ခင်ဗျာ..........
(အယူအဆခြင်းတူပါက လွတ်လပ်စွာ Share နိုင်ပါတယ် ) ကွီးဖြိုး
တဈနိုငျငံ လုံးက ပရိတျသတျတှေ ပါဝငျစခေငျြလို့ vote
စနဈ နဲ့ လုပျတဲ့ပှဲပါ အရအေတှကျမကနျ့သနျ့မရှိလုပျထားလို့ ကိုယျခဈြတဲ့
အဆိုတျော နောကျတဈဆငျ့တကျစခေငျြရငျ Vote မြားမြား ပေးကွပါလို့ ဒိုငျတှကေရော ကြျောထကျအောငျ ကရော အကွိမျကွိမျပွောဆိုနကွေတာ ကွားမိ မွငျမိကွမှာပါ....... အခုက ပရိတျသတျစိတျဝငျစားမှု အမြားဆုံး ဖွဈတဲ့ သူကို ဆုပေးတဲ့ပှဲမို့ သူ့အဆို ပညာ ကို အဓိက ပွိုငျကွတဲ့ပှဲမဟုတျပါဘူး...... ဒါကို Myanmar Idol Season 1 ကွညျ့ဖူးသူတိုငျး ဉာဏျလေး နညျးနညျးရှိရငျတောငျ သိကွမယျထငျပါတယျ....... ဒါကိုမကနြေပျဘူး ဆိုရငျ အစအတညျးက ဒိုငျဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ ဆုံးဖွတျအမှတျပေးတဲ့ ပွိုငျပှဲကို ဝငျပွိုငျသငျ့ပါတယျ. ကွညျ့သငျ့ပါတယျ....အခုMyanmar Idol က ပရိတျသတျအဆုံးအဖွတျဆိုတော့ Winner ဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျ့အတှကျပရိတျသတျ အခိုငျအမာ ရပွီးသားဆိုတော့နောကျထပျ လြှောကျလှမျးမဲ့ အနုပညာလမျးကွောငျးအတှကျအရမျးအစဉျပွပေါတယျ..... အနုပညာရှငျ အဆိုရှငျအသဈတှဆေို သူတို့ကို ပရိတျသတျသိအောငျ လုပျရတာ ဘယျလောကျခကျတယျဆိုတာ အသိဆုံးပါ Myanmar Idol ဝငျပွိုငျလိုကျတာနဲ့ ညီတို့ ညီမတို့ကို တို့ကို မွနျမာ တဈပွညျလုံးက သိသှားခဲ့ပါပွီ ဒီအခကျြနဲ့တငျ ညီတှေ ညီမတှေ Myanmar Idol ကို ကြေးဇူးတငျသငျ့နပေါပွီ အနုပညာလောကမှာ အရညျအခငျြးနဲ့တကျလာတယျ ဆိုတာ ၁၀ ရောကျမှာ ၁ ရောကျလောကျသာ ဖွဈနိုငျပါတယျ ကနျြတဲ့ ၉ ဦးကတော့ သူ့ရဲ့ ပငျကိုယျ ရခေံမွခေံကောငျးမှု Background ကောငျးမှုတှေ နောကျတခုက ကတော့
အနုပညာစမျးထမှုပါ .... ပွောခငျြတာက အနုပညာစမျးထမှု ..... ကနျြတာတှကေ လုပျယူ၍ ရနိုငျပါတယျ ကွိုးစားမယျ အားလုံးကွိုးစားကွမယျ
နောကျခံထောကျပံ့မှု အားကောငျးမယျ ဒါလညျးလုပျယူလို့ရတယျ လူတဈယောကျရဲ့ အနုပညာစမျးထမှုကတော့ ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီ ကိုယျတိုငျ ဆုံးဖွတျတာဆိုတော့ လုပျယူလို့မရနိုငျပါဘူး ကြှနျတေျာ့ကို ကွိုကျပါ ကြှနျမကို Vote ပါနျော လို့ လုပျယူ၍ မရနိုငျပါဘူး .... အနုပညာအလုပျဟာ စမျးထမှု အရမျးလိုပါတယျ သူ့စမျးထတဲ့အခြိနျမှာ အခြိနျကိုကျလုပျယူရတဲ့ အလုပျဖွဈနလေို့ပါ.......
ဥပမာ မွောကျမြားစှာ ရှိပါတယျ .........
ပွတေီဦး အနုပညာလောကမှာ ၁၀ စုနဈ တခု လုပျရှားရုံးကနျကွိုးစားလာတာ အရံအဆငျ့မှာတငျ ရပျတနျ့နတေယျ ဒါပမေယျ့ သူ့ စိမျးထတဲ့အခြိနျမှာတော့ အကယျဒမီတှေ နှဈစဉျရလို့ မနာလိုသူတှပေေါခဲ့တယျ
(ဒှေး သမှေ မငျးသားဖွဈတာပါ ဘာညာပေါ့ ) အဲ့ဒါ မနာလိုသူတှေ ပွောစကားပါ သူကတော့ ဒါတှပွေောနလေညျး သူ့အောငျမွငျမှုနဲ့သူ ဘာမှဖွဈမသှားပါဘူး........
စမျး နဲ့ လုပျရတဲ့ အနုပညာ အလုပျမှာ သူလေးက ကွိုးစားပါတယျ ဘာလို့ မရတာလဲ ဘာလို့ထှတျရတာလဲ
သူကတော့မကောငျးဘဲနဲ့ ဘာလို့ အဆငျ့တှတေကျနတောလဲ လို့ပွောနကွေမှာလဲ........
ကိုယျကွညျ့နတေဲ့ အစီအစဉျက ဘာ System နဲ့ ဆုံးဖွတျ တဲ့ အစီအစဉျ ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပျပါတယျ
ဒေါသ တှေ ဖွဈမနကွေပါနဲ့တော့.....
စိတျသောကတှေ ဖွဈမနကွေပါနဲ့ .......
နိုငျငံကွီးသား ပီသ ကွပါ တို့ ကောငျးတဲ့သူကို Vote ပေးကွပါ ဆိုပွီး ပွောနတောဟာ Vote System ရဲ့
ရညျရှယျခကျြကို မသိနားမလညျ လို့သာ ပွောနကွေတဲ့စကားပါ ......
ကိုယျ က ဒီ မငျးသားကွိုကျပမေယျ့ ကိုယျ့အဖေ အမေ ကို ဒီမငျးသားကွိုကျရမယျ ဆိုရငျမရသလိုပေါ့.....
ကိုယျ့ အမွငျ သူ့ အမွငျ ကိုယျ့အကွိုကျ သူ့ကွိုကျနဲ့ Vote
ပေးကွတာမို့ အခငျြးခငျြး ဒေါသတှေ မာနတှေ မထားကွပဲ ကိုယျအားပေးတဲ့ အဆိုတျော နောကျတဈဆငျ့တကျစဖေို့ Vote မြားမြား ပေးကွပါစို့
ဒါကတော့ MPT Idol ပါ ခငျဗြာ ......
အဲလမှေားလို့ Myanmar Idol ပါ ခငျဗြာ..........
(အယူအဆခွငျးတူပါက လှတျလပျစှာ Share နိုငျပါတယျ ) ကှီးဖွိုး